Buddha In My Life: သဟဿဝဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
Buddha In My Life
“ရတနာမြတ်သုံးပါးကို အသက်ထက်ဆုံး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ၏ အရှင်ဘုရား” “ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ” “ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ” “သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ” အလှုတကာ့အလှုထဲတွင် တရားအလှုသည်သာ အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။
သဟဿဝဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
Posted by Buddha In My Life at 1:51 AM
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် - MP3
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် နှင့် အနက် - သီတဂူဆရာတော် ( Download - 4.3 MB ) ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် ( Download - 15.48 MB ) ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် တစ်ပုဒ်ခ...
သစ္စာတရားလက်ကိုင်ထားဘ၀ခိုင်မြဲရမည်(၁ +၂) - ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရ
ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရ(သီတဂူ)ဟောကြားသော သစ္စာတရားလက်ကိုင်ထားဘ၀ခိုင်မြဲရမည်(၁ +၂) Runtime: N/A Size: 566.16MB Credit to dhammavideo
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် (ပါဠိ၊ အနက်၊ အသံထွက်)
ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ တရားတော်များ
Dr. Nandamalabhivamsa Rector International Theravada Buddhist Missi...
မဟာသမယသုတ် - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
ခုနှစ်နေ့ ဘုရားရှိခိုး (1)
ဆရာတော် ဦးဃောသိတ (5)
တရား MP3 (12)
တရား စာအုပ်များ (22)
တရား ဗီဒီယို (125)
ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ (3)
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် (12)
ပါချုပ်ဆရာတော် အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ (54)
ပဲခူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ (3)
မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ(ဒိုက်ဦး) (1)
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) (1)
အန္တိမဈာပန မှတ်တမ်း (2)
စေတီဘုရား သမိုင်း (2)
အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ - အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာအကြောင်း တရားတော် - အရှင...
တရားထူးရနိုင်သူအကြောင်းတရားတော် - အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံ...
လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ တရားတော် - အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
သူတော်ကောင်းတရား - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မာ၊ သဒ္ဒါ၊ မြတ်ကျမ်းစာ - လယ်တီဆရာတော်ကြီး
ရောဂန္တရ ကင်းဝေးကြပါစေ - လယ်တီဆရာတော်ကြီး
မိုက်မလင်းနိုင်လို့ မြိုက်ခင်းညာစီမှာ - လယ်တီဆရာတေ...
တောရဆောက်တည် လယ်တီအစ - လယ်တီဆရာတော်ကြီး
ပညာလည်းရှာ စာဝါလည်းပို့ချ - လယ်တီဆရာတော်ကြီး
လယ်တီဦးသျှောင် ထွဋ်ဘုန်းခေါင် - လယ်တီဆရာတော်ကြီး
နွားသားမစားရေး မေတ္တာစာ - လယ်တီဆရာတော်ကြီး
ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ် တရားတော် - မိုးညှင်းဆရာတော်ကြီး
အလှ၏ နိဂုံး - ကြာနီကန်ဆရာတော်
ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်ထုံးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ - သီတဂူ...
သင်ကြားခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းတရားတော် - သီတဂူဆရာတော...
အဘိဓမ္မာနှင့် ၀ိပဿနာ တရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
ပဋ္ဌာန်း၊ ဘုရားအနေကဇာတင် နှင့် ခုနစ်ရက်သားသမီး မေတ္တာ...
ဆုတောင်းပြောင်းလိုက်ပါ တရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး...
ပန္တိကလက္ခဏ တရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
ဘ၀ကောင်းကြောင်း လေးပါးတရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
လူမိုက်တို့၏ သွားရာလမ်းတရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး...
ချမ်းသာလေးပါးတရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
ဆုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းတရားတော် - ဒေါက်...
ဓမ္မဋ္ဌ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
မလ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ကောဓ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ပိယ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
သုခ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ဗုဒ္ဓ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ဗုဒ္ဓဂါယာ မေတ္တာပို့ ဓမ္မတေး
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အန္တိမဈာပန မှတ်တမ်း
စေတနာအတိုင်းအကျိုးပေးပုံ - ဘဒ္ဒန္တသံဝရ
အဘိဓမ္မာ မြတ်ဒေသနာ (ဒုတိယတွဲ) ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာတရားတော် - ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ(ပါေ...
အဘိဓမ္မာ မြတ်ဒေသနာ (ပထမတွဲ) ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
ဓမ္မစကြာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ မဟာသမယသုတ်၊ - မင်းကွန်းဆရာေ...
ခဲယဉ်းမှန်းသိရင်ကြိုးစားပေါ့ - ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ
ဘ၀စာမေးပွဲအောင်မြင်နည်း တရားတော် - ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေက...
လောက၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
အတ္တ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ဇရာဝဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ဒဏ္ဍ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ပါပ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အခြေခံ၊ တရား၊ အနှစ်သာရရှုပွားနည်း
တရားမှတပါးအားကိုးရာရှိသလားတရားတော် - ဘဒ္ဓ န္တသဒ္ဒမ္မက...
ထွက်ရာလမ်း ၁+၂ - ဘဒ္ဓ န္တတေဇောသာရ (ပဲခူးဆရာတော်)
“ဒု ၊ သ ၊ န ၊ သော” အဓိပ္ပါယ်
အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရား အကြောင်း သိကောင်းစရာများ - ...
အပါယ်တံခါးပိတ် တရားတော် - ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
စိတ်၏ထွက်ပေါက်များ တရားတော် - ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
ကိုယ်ခံစွမ်းအား တရားတော် - ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
ပဌာန်းပါဠိတော်၊ ဓါရဏပရိတ်တော် - ကြာနီကန်ဆရာတော်
အာဋာနာဋိယသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
ဓဇဂ္ဂသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
၀ဋ္ဋသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
မောရသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
အင်္ဂုလိမာလသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
ပုဗ္ဗဏှသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
ခန္ဓသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
ရတနသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
မင်္ဂလသုတ် - မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး
အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော တရားတော် - ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ...
ဖားအောက် တောရ ဝတ်ရွတ်စဉ် - ဖားအောက်ဆရာတော်
သီလနှင့် ပညာတရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
ကုမုဒြာတွေပွင့်တဲ့ည တရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
ဣဿာနှင့် မစ္ဆရိယ တရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
မေတ္တာတရားတော် - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
အားပေးစကားတရားတော် - အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
ကိုယ်ကျင့်တရားသည်သာလူ့အဆင့်အတန်းတရားတော် - အရှင်နန...
မာနတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း တရားတော် - အရှင်နန္ဒမာလ...
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တရားတော် - အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာ့အခြေအနေနှင့် ဗုဒ္ဓတရားတော် - သီ...
အရဟန္တ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ပဏ္ဍိတ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ဗာလ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
ပုပ္ဖ၀ဂ္ဂ - ဓမ္မပဒ
For Android, Buddha In My Life Apps
တို့ သာသနာ တို့ပြည်ရွာကို
Buddha In My Life မှ တရားဓမ္မများကို တရားအလှုဖြန့်ဝေသောသူသည် ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလို့ငှာ တရားအလှုဖြန့်ဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းတော်တစ်ပါးမဟုတ်ပါခင်ဗျား...။
ဓမ္မမိတ်ဆွေမည်သူမဆို ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလို့ငှာ ကူးယူဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်..။
Buddha In My Life. Picture Window theme. Powered by Blogger.